ध्यान 12/16/2018 | Lost Sheep for Christ
सुसमाचारलाई लूका ईवाइंगलिस्ट ( लूका 3: 10-18 ) बाट हेर्दै उहाँ स्टोरीलाई साझा गर्दै हुनुहुन्छ जुन यूहन्ना बपतिस्मालाई सल्लाहको लागि कतिजना आए। जॉनले मानिसहरूलाई यसो भन्छ “यदि तिनीहरूसँग दोश्रो अतिरिक्त खानेकुरा छ भने उनीहरूको क्लोक्सहरू साझेदारी गर्नुहोस्।” कर कर सङ्कलन गर्न, उनीहरूलाई “के भन्नाले के के भन्छ र” के निर्धारण गरिएको छ “। सिपाहीहरूमा, “विरूद्ध अभ्यास नगर्नुहोस्, झूटो कुरा कसैलाई दोष नदिनुहोस् र तपाईंको वेतनबाट सन्तुष्ट हुनुहोस्”। जॉन बप्तिस्मा कसैलाई कुनै पनि कुरा गर्न को लागी मौलिकता गर्न को लागी छैन। बस एक दयालु, मनपर्दो व्यक्ति हुनुहोस्। बाइबिल एक टाइपोग्राफी शैलीमा लेखिएको छ।यसको मतलब यो छ कि एक कथा नयाँ नियमको शुरुवात हो। यहाँ जॉन मसीहको आगमनको लागि बाटो तयारी गर्दैछ। उहाँले मानिसहरूलाई एक नवीकरणमा उद्धारकर्ताको वचनमा खोलिदिनु भएको छ। पुरानो अगमवक्ताहरू जस्तै, उहाँले रूपान्तरणको लागि बोल्दै हुनुहुन्छ र परमेश्वरको सर्वशक्तिमानको जीवित शब्दहरूमा खुल्दै हुनुहुन्छ।
यूहन्ना बप्तिस्मा मानिसहरू जसले सोचिरहेका छन् र आफैलाई सोध्छन् भने उहाँ मसीह हुनुहुन्छ, संसारको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। “म तिमीलाई पानीको साथ बप्तिस्मा दिन्छु, तर म आउँदैन भन्दा शक्तिशाली छ, जसको स्यान्डलको पट्टा म अन्नको लागि योग्य छैन। उहाँले तपाईंलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। उनको विनाशकारी काँटा आफ्नो हातमा छ, आफ्नो गजल फ्लोर खाली गर्न र गेहूंहरू आफ्नो बर्तनमा भेला गर्न, तर त्यो अयोग्य आगो संग जलाउनेछ। ” उसले मानिसहरूलाई यसो भन्छ कि उहाँ आफैं जस्तै एक मात्र मानिस हुनुहुन्छ। उहाँ जस्तै तिनीहरू पनि मुक्ति चाहिन्छ। उहाँ मात्र पठाउनु भएको परमेश्वरको इच्छा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ तिनीहरूलाई यसो भन्दै हुनुहुन्छ कि उहाँ “आफ्नो स्यान्डल खोल्न अनिवार्य हुनुहुन्छ”। परमेश्वरको पुत्र यति ठूलो छ, कि उनले आफ्नो उपस्थितिको नजिक भएको भए पनि, अझै पनि सृष्टिकर्ताको पछि लाग्न अयोग्य प्राणी हो।परमेश्वरको पुत्रले पवित्र आत्मालाई पठाउनुहुनेछ ( लूका 24:49 ) र तिनीहरूले वरिपरि आफ्ना शिक्षालाई फैलाउने उपहार चाहिने पाउनेछन्। उहाँ सफा घर आउनुहुनेछ। उहाँ शैतान र मृत्युको शक्तिलाई नाश गर्न आउनुहुनेछ र उहाँका वरिपरि ती इकट्ठा हुनेछन् जुन योग्य छन् र उहाँसंग स्वर्गमा ल्याउनुहुन्छ । पाप गर्ने र उहाँलाई अस्वीकार गर्नेहरू, उहाँले न्याय गर्नेछन् र नरकमा पठाउनुहुनेछ।
जब हामी क्रिसमसको दिनको लागि तयारी गरौं, हामीलाई हाम्रो हृदय तयार पार्न सम्झनुको कारण जॉनले सबैलाई यसो गरिरहेको छ। हामीलाई निष्क्रिय चीजहरूमा दिन बर्बाद गरौं, तर हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको काम गर्ने प्रयासमा। हाम्रो हृदय येशूलाई खुल्नै पर्छ। हामीलाई थाहा छैन जब फर्कनेछ। हामीलाई थाहा छैन जब हाम्रो समय यहाँ पृथ्वी अन्त हुनेछ। हामीलाई आमा मरियम र सेन्टको सल्लाह सुन्नुहोस् र सधैं ख्रीष्टमा हाम्रो ध्यान राख्नुहोस्।जब हामी ख्रीष्ट हाम्रो जीवनमा केन्द्रित हुन्छौं। हामी, आफ्नो अनुग्रह र दया संग, बेकार चीजहरू माथि र हाम्रा भाइबहिनीहरूलाई उनीहरूको उपासना गर्न संसारमा सँगै फर्किन्छन्।
← Mengapa kamu menganiaya aku?
तपाई मलाई किन सताउनुहुन्छ? →